Hooyooyinka Iyo Tiyaatarka Oo Cabsi Qarax Looga Kala Cararay - Awdinle Online
Home News Hooyooyinka Iyo Tiyaatarka Oo Cabsi Qarax Looga Kala Cararay
Hooyooyinka Iyo Tiyaatarka Oo Cabsi Qarax Looga Kala Cararay
October 29, 2019 (AO) – Xaalad cabsi ah ayaa ka taagan guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, waxaana la fasaxay dhamaan shaqaalihii dowladda iyo ururka haweenka halkaas ka shaqeynayey kadib qarax la sheegay in la doonayo in lala beegsado.
Waxaa sidoo kale la fasaxay shaqaalihii is-xilqaan ee ka shaqeynayey tiyaatarka qaranka oo ka ag dhow guriga hooyooyinka.
Saraakiil ciidan oo ku sugan xarumahan ayaa Caasimada Online ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyey digniin amni oo ah in weerar qarax ah ku soo socdo guriga hooyooyinka. Digniintan ayaa la sheegay inay ka timid xafiiska amniga ee Villa Somalia.
Waxaa hadda dibada loo soo saaray ciidamo boolis iyo koofiya cas ah oo aad u adkeeyey amniga. Wali ma jiro war rasmi ah oo dowlada kasoo baxay oo arrintan ku saabsan.
Guriga hooyooyinka ayaa waxaa degan ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed. Waxa ay sidoo kale xarun u tahay ururka shaqaalaha rayidka.
Previous articleCiidamada AMISOM Oo Deeganka Carbiska ka helay wiil uu dhalay Madaxweynihii hore ee Uganda
Next articleBiyo Badan Oo Buux Dhaafiyay Isbitaalka Guud Ee Magaalada Baladweyn :- (Sawiro)
Independent News Website